विविध – Page4– Fewa Times
यि चार राशि भएका युवतीजसले धेरै माया गर्ने श्रीमान पाउछन्;
हिन्दु धर्म अनुसार १२ राशिमध्ये ४ राशिका ब्यक्तिलाई उनीहरुको भाग्यले नै धनी बन्न साथ दिने ज्योतिष विद्याका जानकारहरु बताउँछन । ज्योतिष शास्त्रले कुण्डलीमा ग्रहको प्रभाव अध्ययन गरेर भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारे जानकारी दिने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार निम्न उल्लेखित युवतीले प्राय धनि पति पाउने......
पुजागर्दा कतै यस्तो गल्ती गरिरहनु भाकोत छैन;
हामीले हरेक दिन पुजा पाठ गर्नुका बाबजुद पनि हामिले सोचे अनुरुपको फल पाइरहेको हुदैनौ । त्यस्को कारण हो हामीले गर्ने साना साना गल्ती। हिन्दु शास्त्रनुसार हामीले पुजा गर्दा यस्ता गल्ति गर्न हुँदैन् । – केही खाइसकेपछि कुल्ला नगरी वा पानी नपिइ पुजा गर्दा फल प्राप्त हुँदैन्। – गलत कामबाट कमाएको पैसा......
हावापानी अनुसार माघदेखि असोजसम्म मकै लगाउने गरिन्छ। परम्परागत मकै लगाउने मूख्य सिजन भनेको बैशाखदेखि जेठ हो। यो मौसममा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि मकैको राम्रो उत्पादन हुने बाली विशेषज्ञहरू बताउँछन्। गत वर्षदेखि अमेरिकन फौजी किराले नेपाल प्रवेश गरेदेखि मकै लगाउने किसानहरू चिन्तित भएका छन्। फौजी......
तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी चार उपाय अपनाउनुस्,
धन सम्पतीको जोहो गर्न र यसको बचत गर्न अनेकौं प्रयासका बावजुद सफल भइरहनु भएको छैन ? वा तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी अनेकौ समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लक्ष्मीको कृपा भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । लक्ष्मी प्रसन्न भए वा दाहिना भएमा मानिसलाई कहिल्यै धनसम्पति, रुपैयाँ पैसाको अभाव हुँदैन । यस्तोमा......
यी हुन महिलामा हुनुपर्ने ३२ लक्षण, थाहापाउनुुस्
हिन्दु धार्मिक परम्पराअनुसार विवाहका बेला बर(बधुको चिना मिलाउँदा महिलामा हुने लक्षणलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । खासगरी ३२ गुण भएकी युवती सर्वश्रेष्ठ मानिन्छन् । धर्मशास्त्रमा ‘३२ गुणले सम्पन्न’ नारीका बारे उल्लेख गरिएको हुन्छ । महिलनामा हुनु पर्ने ३२ लक्षणहरु यी हुन् १. पद्मासनमा बस्दा वृत्ताकार......
यी हुन् गर्मीमा उपयोगी तरकारीहरु
काठमान्डौं- गर्मी मौसममा खानपानमा अलिकता लापरवाहीले पनि बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ । यस्तो बेला बढी तारेको या मसालायुक्त खाना धेरै खानुहुँदैंन । फुड प्वाइजनको समस्या हुने पनि यही मौसममा हो । त्यसैले यो मौसममा हल्का या सजिलै पच्ने खालको खाना......
एक मुस्कानले ,यसरी चिन्न सकिन्छ मान्छेको स्वभाव
भनिन्छ कि जुन काम ठूला ठूला लडाइँले गर्न सक्दैन, त्यो काम तपाईको एक मुस्कानले गर्न सक्छ । यो मुस्कान हाँसामोमा बद्लियो भने त कुरा नै अर्कै हुन्छ ।हाँसो एक औषधि हो, जसका धेरै फाइदा छन् । तन–मनलाई निखार्नका लागि हाँसो सबैभन्दा उत्तम थेरापी हो । तपाईंले आफ्नो वरपर देख्नुभएकै होला केही व्यक्ति यस्ता......
बिहीबार जन्मिने व्यक्तिको भाग्य कस्तो ?
ज्योतिष शास्त्रमा जन्मबार अनुसार पनि मानिसको भाग्यमा असर गर्ने बताइन्छ । जन्म समय अनुसार नै मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा फलादेश गरिन्छ । आज विहीबार, विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ?भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ| विहीबार जन्मेका व्यक्ति निकै मेधावी, शान्त र समझदार हुने......
– बिजय अधिकारी प्रिय काभ्रेली कमरेडहरु ! जनसमुदाय , आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदिबैनीहरु ! मान्छेहरु सबैजना सहमत नहुन सक्छन् , सत्य तितो हुन्छ , उनलाई तपाई हामीले चिन्छौ बुझ्छौ , देशले चिन्न र बुझ्न नै कहाँ पाएको छ र ? उनको बिरोध के मा हुन्थ्यो ? बोलिको शैली भएन , यहि त हो ! खरो र दरो बोल्ने तितो र कठोर तर यथार्थ र......
श्री स्वस्थानी व्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने कठीन व्रतको पर्व हो । यो पर्व पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमा सम्म एक महिना चल्दछ । यो व्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ । सत्य युगमा भगवान विष्णुको सल्लाह अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउन श्री स्वस्थानी व्रत बसेको र चिताएको......